खोप लगाउने समयमा - This Is Our Shot Canada
अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्
खोप लगाउने समयमा
कोभिड-१९ का खोपहरूका ’boutमा
खोपसम्बन्धी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा
तपाईंले खोप लगाउनुअघि
निम्नलिखित जानकारी यो वेबसाइटका लागि क्यानेडाली सरकार र अन्य वैज्ञानिक र चिकित्सा स्रोतहरूको उपयोग गरी चिकित्सा पेशेवर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरूद्वारा विकास गरिएको हो। यस जानकारीको मनसाय चिकित्सा सल्लाह दिने होइन। कोभिड-१९ को खोपका सम्बन्धमा तपाईंसँग कुनै पनि प्रश्न भएमा सधैँ योग्य स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकबाट सल्लाह लिनुहोस्।
के मैले कोभिड-१९ को खोप लगाएको आधिकारिक रेकर्ड प्राप्त गर्ने छु?
तपाईंको खोपको रेकर्ड प्रान्तीय वा प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकारीद्वारा भण्डारण गरिने छ। सामान्यतया, तपाईंलाई पनि आफ्नो कोभिड-१९ को खोपको रेकर्डको कागज र/वा विद्युतीय प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छ। तपाईंलाई कस्तो कागजात उपलब्ध गराइने छ भन्ने ’boutमा बुझ्नका लागि कृपया आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी वा खोप केन्द्रमा सोध्नुहोस्।
मेरो खोप लगाउनका लागि निर्धारित समयमा के मैले आफूसँग कसैलाई ल्याउन सक्छु?
सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंलाई खोप लगाउने प्रक्रियामा सजिलोका लागि कसैको सहायता आवश्यक छ वा तपाईंलाई सहायता वा दोभाषे आवश्यक छ भने तपाईं आफूसँग एक जना व्यक्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ।
मेरो खोप लगाउनका लागि निर्धारित समयमा मैले के-के ल्याउन आवश्यक छ?
तपाईंले आफूसँग आफ्नो अपोइन्टमेन्टका पुष्टिकरणको प्रिन्ट गरिएको वा विद्युतीय प्रतिलिपि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईंसँग भएमा आफ्नो स्वास्थ्य कार्ड पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
एउटा टि-सर्ट खरिद गर्नुहोस्
अस्वीकरण: staging-thisisourshot.kinsta.cloud ले तपाईंको सामान्य ज्ञानको लागि स्वास्थ्य जानकारी प्रदान गर्छ। यो जानकारीले लिखित कानून वा पेशेवर चिकित्सकीय सुझाव, निदान वा उपचार प्रतिस्थापन गर्दैन। यो सार्वजनिक प्रयोगको लागि सामान्य सारांश हुन अभिप्रेरित छ। तपाईंसँग चिकित्सा अवस्था बारे प्रश्नहरू छन् भने, सधैँ चिकित्सा वा अन्य योग्य स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव खोज्नुहोस्। हामीले वेबसाइटको प्रयोग गर्दा वा त्यसमार्फत उपलब्ध गराइएका सामग्री, सफ्टवेयर, ग्राफिक, लिङ्क वा सञ्चारहरूको शुद्धता, विश्वसनीयता, पूर्णता, सटीकताको लागि कुनै दायित्व लिँदैनौं।